विश्वकप देखी सिरी – ए सम्मका हिरो – मारियो मान्जुकिच ! पछि परे रोनाल्डो ? - Experience Best News from Nepal
विश्वकप देखी सिरी – ए सम्मका हिरो – मारियो मान्जुकिच ! पछि परे रोनाल्डो ?
फुटबल- सिरी-ए , पाँच पटकका ब्यालेन’डीअर बिजेता पोर्चुगि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इटालियन पहिलो गोलको खोजीमा छन्, भने क्रोसियन स्ट्राइकर मारियो मान्जुकिचले भने युबेन्ट्सका निम्ति 1 गोल र 1 गोल सहायता दिदै टिमलाइ २-1को जित दिलाउदै सिरी-एका ठुला हस्ती बनेका छन् ।
मान्जुकिच युबेन्ट्सबाट आफ्नो खेल खेल्दै आएता पनि भबिस्यका निम्ति सिरी-ए का उच्च खेलाडी बन्नेमा दुइ मत छैन भने रोनाल्डो हालै मात्रै सिरी-एमा प्रवेश गरेका छन् जसको खेल अझै फैलिन बाकी छ। साथै मान्जुकिचलाइ क्लब छाड्ने इच्छा भएको खण्डमा क्लब छाड्नसमेत अनुमति क्लबले दिएको थियो र उनको माग ला लिगा देखि प्रिमिएर लिग र गर्दै चीनमा समेत रहेको थियो। र आज उनले आफ्नो क्लब युबेन्ट्सलाइ पहिलो गोल दिलाएका छन।
आफ्नो देश मार्फत विश्वकप २०१८ मा नायक खेल खेल्दै आफ्नो देशलाई अग्रता दिलाएका मान्जुकिचलाई जुबेले आफ्नै क्लबमा राख्नेमा जोड दिन्छ। मान्जुकिचले आफ्नो देशसंगै आफ्नो क्लबलाइ समेत आफ्नो पूर्ण जोड दिएकोमा म्यानेजर खुसि छन्।
जसरी, गोन्जालो हिगोइन् ए.सी मिलान प्रवेश गरे तेसै गरि डी-बयाला, रोनाल्डो र कोस्टा अगाडी खेली रहदा मान्जुकिचको साथ हुदा च्याम्पियन लिगमा समेत सिरी-ए अग्र रहने टिम र कोचको दाबी रहेको छ। शारीरिक रुपमा रसियामा बदर साबित भएका ३२ बर्षे मारियो मान्जुकिच रोनाल्डोको जुबे प्रवेशले प्रभाब पार्ने देखिएको थियो तर उनलाई त्यसको प्रभाब नदेखिएको पाइन्छ। उनले क्लबमा फर्किएको पनि संकेत गर्दछन।
चिएबो बिरुद्धको खेलमा बेन्चमा राखिएका मान्जुकिच हिजोको खेलमा नएक सावित भए। लाजियो बिरुद्धको खेलमा रोनाल्डोबाट छुटेको बलमा राखेको प्रहारलाइ निकै ठुलो मानिएको थियो। माटूडीले निर्णायक गोल जुबेका निम्ति गरेता पनि उनको गोललाई खास मानिएन।
होला रोनाल्डो युबेन्ट्सका स्टार होलान तर मान्जुकिच हालका निम्ति जुबेन्ट्सका निम्ति सबै भन्दा प्रभाबकारी खेलाडी मान्न सकिन्छ।